SEFAFI : Tsy manjary ny seraseran’ny Ceni -
AccueilSongandinaSEFAFI : Tsy manjary ny seraseran’ny Ceni
Taorian’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, ny Ceni indray izao no nahazo tsindrim-paingotra avy amin’ ny SEFAFI, na ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena. Nambaran’ny SEFAFI, fa tsy maharaka ny seraseran’ny Ceni, ka mety hitarika korontana, satria haingana noho izy ireo ny kandidà amin’ny famoahana vaovao, sady efa nilaza ny hampiasa fitaovana arifomba. “Ilaozan’ny an’ny kandidà lavitra be, na amin’ny lanjany, na amin’ny fahazavany ny fampitam-baovaon’ny CENI, nefa aza ny kandidà vao eo am-panombohana fotsiny”. Noho izany dia nanainga ny Ceni ny Sefafi, ny amin’ny tokony hampahafantaran’izy ireo ny toromarika ilaina amin’ ny fifidianana, “ny mpifidy dia mbola miandry foana ny hamoahan’ny CENI ny toromarika ilaina mikasika ny fizotran’ny fifidianana…..Misy zavatra mampisalasala sasany tokony harenina haingana : ny isa sy ny toeran’ny birao fandatsaham-bato, ny fizarana sy ny fampiasana ny karatry ny mpifidy, fanapariahana araka izay tratry ny santionany amin’ilay biletà, ny fomba fanaraha-maso ny fifidianana, ary ny fampahafantarana ny mpanara-maso sy ny fitsinjarana azy any amin’ny birao fandatsaham-bato rehetra any, ny fahazoana ny vokatra any amin’ny tambajotram-pifandraisana”.
Rariny loatra ny kiana izay entin’ny Sefafi manoloana ny fomba fisian’ny Ceni amin’ ny fampitam-baovao, satria dia voaporofo ny fihisaran’izay lafin’ny serasera izay. Hita izany amin’ny tranonkalam-pifandraisana sy ny tambajotra sosialin’ity rafitra ity, satria raha toa misy ny vaovao avoakan’ny Ceni, dia ora efatra na ny ampitso mihitsy aza vao hita amin’ ny tranonkala na tambajotran’izy ireo izany. Noho izany, ankoatra ny fanomezana fiofanana ireo sehatra hafa mpikarakara ny fifidianana, dia tokony hahazo fiofanana ihany koa ireo izay miandraikitra ny serasera. Nilaza mihitsy ny Sefafi fa mety hitarika korontana io tsy fifandanjana io raha ny famoahana ny vokatra no resahina, amin’ny fotoam-pifidianana. “Mampanahy io tsy fifandanjana io raha sendra misy fifanolanana eo amin’ny vokatra”. Ankoatra izay dia nahitsy ny Sefafi ny amin’ny tokony hanitsiana ny lalàm-panorenana, satria hoy izy ireo hoe mifanipaka ny rijan-teny. Noho izany ireo kandidà milasataka hofidina, dia tokony efa hilaza sahady ny fanovana tiany entina anatin’ ny lalàm-panorenana. Ankilany hoy ny Sefafi, dia efa samy manao izay ataony ireo kandidà, amin’ izao fotoanan’ny fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana izao.